सुरु बच्चा र बच्चा पोषण र केयर Vaporiser
एकमा Vaporiser यो एक घरेलू उपकरण हो, जुन अधिक र अधिक व्यापक रूप देखि प्रयोग गरिन्छ। यो भाइरस र प्यासीफायरहरु को नसबंदी को लागि प्रयोग गरिन्छ। यी यन्त्रहरु को एक ठूलो चयन छ। यो उच्च गुणवत्ताको उपकरण हो भनेर निश्चित गर्न, तपाईंले आफैलाई खरिद गर्नु अघि चयन गरिएको यन्त्रको बारेमा सूचित गर्नु पर्दछ। हामी भापसरको व्याख्या गर्न प्रयास गर्नेछौं।
1 Vaporisator - यो उपकरण के हो?
2 Vaporisator - यो कसरी काम गर्दछ!
3 भ्यापर्सरका अनुप्रयोगहरू
3.1 एक भापसरले तपाईंलाई सुरक्षा दिन्छ!
4 Vaporiser - प्रजातिहरू!
4.1 a।) मुख्य सञ्चालनका साथ भ्यापरिजर
4.2 बी।) माइक्रोवेवको लागि भ्यापरिजर
4.3 c।) खाना पकाउने ठाउँको रूपमा भ्यापोसर
5 भ्यापरियर खरिद मापदण्ड
5.1 a।) खरीद मापदंडको रूपमा पैसाको लागि मूल्य
5.2 बी।) अवधि
5.3 सी।) क्षमता
5.4 घ) अपरेटिङ मोड
5.5 ई।) परिचालन सुविधा
6 मामुजु MMMXXUMX 20255डिजिटल वैपोजजर
7 10251010 मा NUK2वापरिजर 1
Vaporisator - यो उपकरण के हो?
यो जस्तो देखिन्छ Vaporiser एक साधारण साधारण उपकरण हो, जसको उद्देश्य विभिन्न सक्रिय सामग्रीहरू भत्किएको छ। तिनी सुरुमा एनेस्थेसियाको लागी औषधिमा र साँझको लागि प्रयोग भएको थियो। आज हामी भ्यापरियरको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी यन्त्रको धेरै विशिष्ट वरीयताको अर्थ बुझ्छौं: एक सजिलो घरको उपकरण, अप्ठ्यारो डिजाइन गरिएको, जुन बच्चाहरु को बोतलों को बाँझ को लागि लगभग विशेष रूप देखि प्रयोग गरिन्छ। बच्चाहरु र बच्चाहरु को लागि स्वच्छता स्वच्छता हो, किनकि भापकर्ताहरु लाई युवा आमाबाबुहरु द्वारा आपूर्ति गरिन्छ।
Vaporisator - यो कसरी काम गर्दछ!
एक Vaporiser पानी भाप संग काम गर्दछ। भापेरियाको अपरेसन अण्डा कुकर जस्तो छ। यद्यपि, यो उपकरण अण्डाको प्रश्न हो, तर बच्चाहरू, बोतहरू र अन्य बच्चाको गियर जस्ता आपूर्तिहरू होइनन्। भ्यापरिजरमा, ठीकसँग मिठो पानीको मात्रा बिस्तारै गरम गरिनु पर्छ र अन्ततः हटाउनुपर्छ। यो evaporating पानी जस्तै गर्मी उत्पन्न सबै जीवाणुहरु र pacifiers र बोतल, पूर्ण र नष्ट अवशेषहरु बिना गर्न अदृश्य छन् कि जीवाणुहरू। मूलतया, एक भ्यापेरियर एक मेडिकल स्टेरलाइजर संग समेटिएको छ। यद्यपि, यो डिशवाशर बदल्न सक्दैन। खाद्य भण्डार र अन्य ग्याँस नसकेको हुनु भन्दा पहिले धोएको हुनुपर्छ।
पहिलो, प्रश्न उठ्छ: बचपनको बाँडिना गरेर दोस्रो सेवन, के अर्को टेक्निकल उपकरणको मद्दतले हल्का-मनपर्छ जस्तो देखिन्छ? समय र पैसा सामान्यतया युवा आमाबाबुको नजिक हुन्छ। जवाफ हो हाँ, यो धेरै कारणहरूको लागि सार्थक छ!
विशेषकर बच्चाहरु र बच्चाहरु लाई रोगहरु द्वारा उत्पन्न संक्रमणहरुको लागी अति संवेदनशील हुन्छन्। त्यसैले, बच्चाहरु र यहाँ सम्म कि साना बच्चाहरु मा स्वच्छता को उपेक्षा नहीं गर्नु पर्छ। यहां सम्म कि सबै भन्दा सावधान सावधानी संग, व्यंजन मा कुनै पनि स्वीकार्य रोगाणु र जीवाणुहरू छैनन्, को बिरुद्ध जसमा बच्चाहरु र बच्चाहरु लाई रगत मा कुनै पनि सुरक्षा को उत्पादन नहीं गर्छन।
एक Vaporiser सजिलो र प्रयोग गर्न छिटो छ। यो चाँडै छिटो छ जस्तो लाग्छ। यसकारण युवती आमाबाबुको रोजगारीको जीवनमा यो उपकरण एक राहत हो जुन तिनीहरू आभारी हुन्छन्। बोटमा बोतलहरू र soothers को समय-उपभोग गर्ने अतिरिक्त अपमानजनक उबलिरह अब आवश्यक छैन। कुखुरी चाँडो भाप मा पानी भरिएको छ र पानीको सुरु बटन थिचिएको छ। भयो!
एक भापसरले तपाईंलाई सुरक्षा दिन्छ!
भापसरले महसुस र वास्तविक सुरक्षा सिर्जना गर्दछ! यसैले यो खरीदको लायक छ, तपाईंको बच्चाले पनि स्तनपानमा भइरहेको छ भने। नजिकको निरीक्षणमा, यो देख्न सकिन्छ कि त्यहाँ उच्च गुणस्तर र बजारमा एकदम राम्रो सस्तो मोडेलहरू छन्, जसले सबैलाई खर्च गर्न सक्छ। सुरक्षाको बेहोरा सुधारिएको तपाईंको बच्चाको लागि भावनाको रूपमा आउँछ।
Vaporiser - प्रजातिहरू!
त्यहाँ दुई आधारभूत प्रकारहरू छन् Vaporiser, दुवै प्रणाली पानी भाप को आधार मा काम गर्दछ, तर अंतर यो तरिका मा पानी उत्पन्न हुन्छ।
a।) मुख्य सञ्चालनका साथ भ्यापरिजर
यी उपकरणहरूमा विद्युत उपकरणहरूको सञ्चालनको शास्त्रीय मोड छ। तिनीहरूको केबल र प्लग मार्फत पावर जडान छ। यो Vaporizer एकल एकाइ हो र कुनै अतिरिक्त सामान बिना सजिलै संग कार्यात्मक छ।
एक संचालित vaporizer को फाइदा:
- कम ऊर्जा खपत
- ठूलो क्षमता
- कुनै सामान आवश्यक छैन
एक स्वतन्त्र उपकरणको रूपमा भ्यापेरिसको हानि:
- ग्रेटर स्पेस आवश्यकता
- अधिक महंगी खरीद
बी।) माइक्रोवेवको लागि भ्यापरिजर
माइक्रोवेवको साथ प्रयोगको लागि भ्यापसर अनिवार्य रूपमा एक माइक्रोवेव-अनुकूल प्लास्टिकको कन्टेनर एक पानी कक्ष संग। बोतलहरू पनि सँगसँगै कन्टेनरमा प्याकमा प्याक गरिन्छ र त्यसपछि मात्र सम्पूर्ण भाग माइक्रोभ्वावमा राख्नुहोस्। यो त्यसपछि सामान्य रूपमा स्विच गरिन्छ र भ्यागुनाइजेशन माइक्रोवेव-ठेठ गतिको साथ चलाउँछ।
माइक्रोवेवको साथ भ्यापरिजरको लाभ:
- कम स्थान आवश्यक छ
- नेटवर्क संचालित मोडेल भन्दा उच्च गति
यी भापेरियर मोडेलहरूको हानिकारक:
- माइक्रोवेव बिना यो काम गर्दैन!
- नसकेको समयमा उच्च ऊर्जा खपत
- कम क्षमता
c।) खाना पकाउने ठाउँको रूपमा भ्यापोसर
वैपिसिसेटरको अझै पनि अज्ञात प्रकार, जुन व्यापारमा मात्र धेरै पृथक छ, ठण्ड बाबिनको खानामा भाप छ। त्यसैले तपाईंसँग एकल मा दुई यन्त्रहरू छन् र न केवल बालबालिकाको कपडा सफा हुनेछ, तर बच्चालाई पनि तृप्त गरिनेछ।
भ्यापरियर खरिद मापदण्ड
a।) खरीद मापदंडको रूपमा पैसाको लागि मूल्य
सम्भावना सबै खरिद मापदण्डको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल्य / प्रदर्शन अनुपात हो। पहिलो दर प्रस्ताव, जुन असुरक्षित गुणस्तरको माध्यम ले चमकिएको छ, किनकि कुनै पनि इमान्दारि खरिद गर्न को लागी छैन। एक राम्रो मोडेल, जो एक उच्च मूल्य द्वारा ध्यान दिए छ किनकि केहि नै खुसीसाथ खरिद गरिएको छ।
दौडको अवधि के हो? दुई देखि 30 मिनेट बीचमा बच्चा बोतलों र प्यासीफार्महरु को नसबंदी समाप्त हुन सक्छ। विशेष गरी कामको समयमा, जवान आमाबाबुले अझ राम्ररी हेरिरहनु पर्छ। यो लागतको प्रश्न हो: अब लामो पास रहन्छ, सञ्चालनको लागि थप बिजुली चाहिन्छ र बिजुली आज एक महंगा राम्रो छ।
एक vaporizer देखि अर्को सम्म, क्षमतामा पर्याप्त मतभेदहरू छन्। केही Vaporiser मोडेल प्रयोग बोतल आकारमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ, जुन धेरै उपयोगी छ किनकी बच्चा बोतलबारहरू मान्य छैन। अधिक मात्राको साथमा यो अतिरिक्त व्यंजनहरू बाँड्न अनुमति दिन्छ
घ) अपरेटिङ मोड
सञ्जाल अपरेसन वा माइक्रोवेव एक खरिद गर्दा कुञ्जी प्रश्न हो Vaporizer, ऊर्जा आपूर्ति, गतिशीलता र क्षमता जस्तै सीधा जोडिएको छ।
ई।) परिचालन सुविधा
सञ्चालन कस्तो छ। के उपकरण डिशवाशर सुरक्षित छ? मालिक Vaporiser स्वचालित बन्द के उसले बच्चाको खाना पनि बढाउन सक्छ?
भ्यापरिजर किन्ने बेला मैले के गर्नु पर्छ?
निम्नमा, हामी तपाईंलाई तीन वेपोजकर्ता मोडेलहरू प्रस्तुत गर्दछौं, जुन किन्न लायक छ:
मामुजु MMMXXUMX 20255डिजिटल वैपोजजर
Mamajoo Vaporizer छ पाँच प्रकार्यहरु। एक उपकरणमा डिजिटल भाप सारिनेवाला र बच्चाको खाना हीटरले हालको प्रविधिसँग निर्मित गरिएको छ र बच्चाको थप सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि आमाबाबुलाई सजिलो सम्भावना प्रदान गर्दछ। यो सबैभन्दा प्रभावी नसमणि हो। Mamajoo Vaporiser निम्न कार्यहरू छन्: नसबंदी, सुखाने, भाप पकाउने, खानाको तापनि। एक ergonomic डिजाइन र कॉम्पैक्ट डिजाइन आमाबाबु धेरै स्वतन्त्रता संग मात्र प्रदान गर्छन, न केवल घर मा, तर प्रयोग को आसानी पनि। Mamajoo5फंक्शन Vaporizer एक सानो भरने खुल्ला खुल्यो संग सानो सानो भरने खुल्ला या6नकटेल बोतलों संग5बच्चा बोतलें ले सकते हो। यसबाहेक, उपकरणसँग अन्य पोषण सहायक उपकरणहरूको लागि अतिरिक्त ट्रे छ जस्तै: बच्चा बोतल निपल र प्यासिफायर। यसको माइक्रोprocessor-controlled technology को कारण, Mamajoo पुरा तरिकाले स्वचालित छ र यो प्रक्रिया एकाइ को तल मा एलसीडी मनिटर मा प्रदर्शित गरिन्छ। जब स्टिरिलाइजेसन प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ, भापेरजर स्वचालित रूपमा सुखाने प्रक्रियामा स्विच गर्छ। सुखाने प्रक्रियाको अन्त्य पछि, एक 6-गुना सिग्नल भ्वाईस र यन्त्र स्वचालित रूपमा बन्द गर्दछ। यो Vaporiser ग्राहकहरु र प्रस्तावहरु बाट एक राम्रो मूल्य प्रदर्शन अनुपात को संयोजन को लागी लगभग केवल सकारात्मक समीक्षा प्राप्त गरेको छ।
ड्रामा, स्वस्थ, सुरक्षित, नवजात शिशुहरूका लागि, बच्चा स्वास्थ्य, द्रुत ड्राई,, प्रति विज्ञापन बेबीको साथ मामाजु--फंक्शन स्टीम स्टेरिलाइजर
चेतावनी: कुल्ला सहायता, घर्षण वा जीवाणुरोधी एजेन्टहरू उत्पाद सफा गर्न प्रयोग नगर्नुहोस्। प्राकृतिक डिटर्जेंट छनौट गर्नुहोस्।
10251010 मा NUK2वापरिजर 1
NUK 10251010 Vaporiser2यन्त्रमा 1 हो र यसलाई डिस्फेट र भाप गर्न सक्दछ। त्यहाँ5NUK बच्चा बोतलें र ब्रेकरहरू यसमा छन्। भ्यापियररले तपाईंलाई रासायनिक उपयोग को बिना बच्चा को उपयोग को पर्यावरण को अनुकूल गर्म हटइन प्रदान गर्दछ। यो2यन्त्रमा एक 1 हो र पनि खाना तयारीको लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। Vaporiser VDE परीक्षण छ। यदि तपाईं फलफूल र सब्जिहरु बाट गिलास ताजा बाट समाप्त खानाको सट्टा आफ्नो सानो मनपर्ने तयारी गर्न चाहानुहुन्छ, NUK बाट Vaporisator सही यन्त्र हो। बच्चाको रौतहटको बाँडफाँडको अलावा, यो दिनको ताजा बच्चाको भोजनको लागि छिटो, छिटो चापको लागि उत्तम छ। तैयारी को यस तरिका मा, महत्वपूर्ण भिटामिन र ट्रेस तत्व भोजन मा बरकरार रहछन। यस उपकरणको लागि मूल्याङ्कनहरू लगातार सकारात्मक छन्।
10251010 मा NUK2भ्यापोसर 1, डिलिमिरेसन र भाप गार्निश, को लागि5NUK बच्चा बोतलें र दाँतका लागि
5 बोतल सम्मको लागि भत्कने, वैक्यूम क्लीनर र सहायक उपकरणहरू
पर्यावरण अनुकूल हट हानिकारक
1 यन्त्र =2प्रकार्यहरू - पछि खाना तयारीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ
der Vaporiser मुख्य कार्य संचालन ऊर्जा खपत मा अधिक किफायती छ र माइक्रोवेव को लागि एक मोडेल भन्दा ठूलो क्षमता छ। पछि, तथापि, सञ्चालनमा उच्च गति प्राप्त गर्दछ र छिटो समाप्त भयो।
नसबंदीको अवधि सम्बन्धित मोडेलमा निर्भर गर्दछ। बोतलहरू भण्डारणमा रहन सक्छन् जबसम्म उनीहरूले प्रयोग गरेनन, त्यसो कि नसबंदी प्रभाव असीमित छ, जुन यदि हाईको हातले नसकावटको साथमा छैन। प्रायजसो भापकर्ताहरूले मात्र बाँझ्न सक्छन्। केही निर्माताहरूले यन्त्रहरू प्रस्ताव गर्छन् जुन बच्चाको खाना पनि बढाउन सक्छन्। चूंकि बच्चा बोतलब्रेड मान्य छैन र फरक आकार र मोटाई हुन सक्छ, यो खरिदबाट अवस्थित बोतलहरूसँग संगतता जाँच गर्न सिफारिस गरिन्छ। धेरै कारणहरूको लागि भ्वाईर खरिद खरिद हुन्छ।
बच्चाको सहनशीलता भनेको 100% हो मर्मतबाट मुक्त र एक निश्चित ठाउँ हो जहाँ यो विस्तारित अवधिको लागि बाँझ रहन्छ। यसले हातबाट बाँझिरणको विरुद्ध बिजुली बचत गर्छ। त्यहाँ धेरै प्रकार्यहरू छन्, जुन खानाको ताप र तयारीको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। युवा आमाबाबुले पूर्णतया राहत पाएका छन् किनभने भ्यापियरले आफैले स्वचालित रूपमा स्विच गर्दछ र ध्वनिक सिग्नल पठाउँदछ जसले बाँझ्ने प्रक्रियाको समाप्तिको घोषणा गर्दछ। उपकरणहरूसँग फरक फरक मूल्य छ, जुन विभिन्न कार्यहरूमा निर्भर गर्दछ।